Endritsoratra 20 angano amin'ny endriny | Famoronana an-tserasera
Matetika izahay dia niresaka momba ireo endritsoratra sy endritsoratra izay miteraka adihevitra sy fizarazaran-kevitra malalaka ao amin'ny vondron'olona manao sary. Misy ny tolo-kevitra izay tena miteraka fikorontanana lehibe toy ny ao amin'ny Comic Sans misy mpanaratsy izaitsizy sy klioba mpankafy ara-bakiteny. Na izany aza, misy ihany koa ny tranga mifanohitra amin'izany: Ny loharano sy ny tolo-kevitra izay ohatra tsy azo lavina ary maneho toetra tsara eo imason'ny mpitsikera rehetra. Endritsoratra angano.
Niezaka nanangona aho ohatra roapolo izay sangan'asa tsy azo iadian-kevitra avy amin'ny tontolon'ny typography. Mazava ho azy, raha mihevitra ianao fa misy ny sasany tokony ho ao anatin'ity lisitra ity dia avelao aho hilaza hevitra.
Avant Garde.-Karazan-tsoratra geometrika sans serif typeface ary ny mpamolavola azy dia Herb Lubalin izay namorona azy tamin'ny 1967 ho an'ny gazety antsoina hoe Avant Garde, na dia telo taona taty aoriana dia nohavaozin'i Carnase izay nanapa-kevitra ny hanampy litera boaty ambany. Nahita fahombiazana lehibe hatramin'ny folo taona fitopololahy.
Ho avy.- Adrián Frutiger no namorona azy tamin'ny taona 1988 ary karazana sans serif mahazatra izy io. Miorina amin'ny endriny Futura sy Erbar izay 60 taona no lehibe. Ny fahatsorany sy ny maha-ara-dalàna azy dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo ampiasaina indrindra amin'ny lohateny na lahatsoratra matevina.
Bickham Script Pro.- Somary mbola tanora kokoa izy, teraka tamin'ny taona 1997 teo ho eo ary manome fahatsarana kanto, izay no antony ampiasana azy amin'ny hetsika manokana toy ny fampakaram-bady na fivoriana ofisialy. Izy io dia karazana soratana an-tanana ary tena kilasika. Ny mpanoratra azy dia i Richard Lipton.
Bodoni.- Izy io dia endritsoratra noforonin'ny Giambattista Bodoni italianina. Taratasy serif ireo ary tsotra be. Mampiseho tsy fandriam-pahalemana amin'ny hatevin'ny tsipika izy ireo. Izy io dia iray amin'ireo typefaces misy indrindra ankehitriny, indrindra eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety.
Clarendon.- Nanomboka tamin'ny 1845 ary izy no endritsoratra typografika voasoratra anarana voalohany. Ny taonany dia nahatonga azy hanana fiantraikany ara-tantara, raha ny tena izy dia be mpampiasa ny Alemanina nandritra ny Ady lehibe voalohany. Azo antoka fa mahazatra anao izany satria izy no endritsoratra ampiasaina amin'ny afisy "Wanted" mahazatra an'ny andrefana sy lavitra andrefana.
Cocon.- Evert Bloemsma dia namorona azy tamin'ny taona 1998 ary tena ilaina izy io na eo amin'ny sehatry ny dokam-barotra na eo amin'ny sehatry ny fonosana. Izy io dia variant izay mivoaka amin'ny fomba maro ary afaka mamokatra vokatra tena tsara raha hainao ny mampiasa azy.
DIN.- Mbola tanora ihany koa, raha ny marina dia noforonin'i Albert-Jan Pool tamin'ny 1995. Izy io dia iray amin'ireo endritsoratra be mpampiasa indrindra ankehitriny ny mpamorona ary efa be mpampiasa ohatra ho an'ny famolavolana ny famantarana ny fifamoivoizana na ny fampiharana ara-teknika sy ara-pitantanana. Ny anarany dia fanafohezana ny Ivotoerana alemanina ho an'ny fanatontoloana.
Eurostile.- Anisan'ireo taona 1950 ary noforonin'i Aldo Novarese sy Alessandro Butti, ity endritsoratra ity dia manana endrika geometrika sy madio. Izy io dia manana konotations futuristic noho ny fombany ara-teknika, izay mahatonga azy ho manintona be ho an'ireo tetikasa mifandraika amin'ny sehatry ny haitao.
Franklin Gothic.- Izy io dia modely Sans Serif noforonina sy novolavolain'i Fuller Benton manodidina ny taona 1992. Fianakaviana misy kinova na karazany maro karazana izy io ary noho izany dia manana fampiharana marobe toa ny gazety na dokam-barotra.
Frutiger.- Ilay namorona azy, Adrian Frutiger, dia nanao batemy azy tamin'ny anarany mitovy. Natao manokana ho an'ny takelaka misy ny seranam-piaramanidina Charles de Gaulle any Paris. Tamin'ny voalohany dia nomanina ho endrika sans serif typeface izy io, na dia misy endrika serif sasany aza ankehitriny.
Future.- Ny solontenan'ny Sekolin'i Bahuaus ary angamba ilay nahavita fahombiazana lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-1928. Namboarin'i Paul Renner nandritra ny taona XNUMX. Ny endriny angamba no iray amin'ireo motera lehibe indrindra sy aingam-panahy ho an'ny fisehoan'ny endrika vaovao geometrika tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny hakantony sy ny ergonomika dia mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny fitaovana fanaovana dokambarotra.
Garamond.- Namboarin'i Claude Garamong nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Mahagaga fa maty tao anaty fahantrana ny mpanoratra antsika na dia teo aza ny mpamorona ilay lasa typografikan'ny taonarivo araky ny fanadihadiana nataon'ny matihanina. Ity typeface ity dia manana fandanjana tonga lafatra eo amin'ny singa azo ampiharina sy ilay singa kanto.
Gill Sans.- Nosoratan'ny mpanoratra sarimihetsika Eric Gill ary navoakan'ny mpandrafitra Monotype tamin'ny andro fahatelo tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia typeface tena manjavozavo sy be mpampiasa izay be mpampiasa amin'ny antontan-taratasy famantarana sy ny asa maritrano toy ny London Railway.
Gotham.- Ity vatosoa ity dia eo an-tampon'ny endri-tsoratra tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra araka ny filazan'ny manam-pahaizana marobe ary efa nekena sy nampiasaina betsaka; raha ny marina dia voafidy ho amin'ny fampielezan-kevitra politika Obama tamin'ny taona 2008. Ireo namorona azy? Jonathan Hoefler sy Tobias Frere-Jones.
Helvetica.- Ny fahatsorany sy ny hatsarany dia nahatonga azy ho karatra bibidia an'ny mpamorona rehetra. Izy io dia avy amin'ny karazana sans serif ary fianakaviana iray misy karazana karazany marobe izay mahatonga azy ho mety amin'ny karazana tolo-kevitra rehetra: Manomboka amin'ny antontan-taratasy ara-tsiansa, ara-dalàna na ara-teknika, hatrany amin'ny famantarana ny orinasa na fanaovana doka. Novokarin'i Max Miedinger sy Edouard Hoffmann teo amin'ny taona 1957.
Interstate.- Izy io dia aingam-panahy avy amin'ny abidia ampiasaina any Etazonia ho an'ny fambara arabe. Ny fahaizany mamaky teny sy ny hafainganana amin'ny fampitana ny hafatra dia mahatonga azy ho mpiorina tsara amin'ny tolo-kevitra momba ny doka, pejy web na gazety.
Kepler Std.- Ao ambadiky ny an'ity typeface ity dia fanomezam-boninahitra an'i astronoma alemana Johannes Kepler. Slicmback ho an'ny Adobe no namolavola azy ary misy toetra mampiavaka azy, toy ny fifangaroana eo amin'ny rivotra maoderina sy ny rivotra klasika kokoa, ary koa ny heriny sy ny marim-pototra.
Tanjona.- Noforonin'i Erik Spiekermann tamin'ny faramparan'ny taona 90. Tena malefaka sy mety amin'ny fampiharana rehetra. Amin'ny lazany goavambe dia nekena ho Helvetica tamin'ny taona 90 izy io.
Minion.- Karazan-tsoratra nomerika novolavolain'i Robet Slimbach tany amin'ny taona 1990 tany ho any izy. Nahazo aingam-panahy tamin'ny vanim-potoana Renaissance ary miovaova be ny fampiharana azy noho ny fahaizany mamaky.
Myriad.- Io dia fomba Sans-serif ary namboarin'i Robert Slimbach sy C. Twombly ho an'ny trano Adobe. Izy io dia malaza indrindra amin'ny fampiasana azy ho toy ny typeface an'ny orinasa Apple hatramin'ny 2002. Izy io dia azo fantarina tsara amin'ny sisa tavela amin'ny Sans Serif amin'ny rambon'ny litera "y".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Endritsoratra 20 angano noforonina